Streamline Training & Learning Center | The best nursery school in Yangon, Myanmar.
STREAMLINE မှ ၂ နှစ်မှ ၁၄ နှစ်ကလေးများအား ဘက်စုံပညာ (အင်္ဂလိပ်စာ၊ သချာင်္၊ ပန်းချီ၊ လက်မှုပညာ၊ အဆို၊ အက၊ တရုတ်စာ၊ မြန်မာစာ၊ အားကစား၊ ကွန်ပြူတာ) ထူးချွန်စေရန် အင်္ဂလိပ်စာကို အခြေခံ၍ စနစ် တကျ လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးပါသည်။
A school is not onlyaplace forachild to acquire knowledge and information per se. It should also be an environment where the child gainsavariety of useful and enjoyable skills:aholistic education, which will help to developachild’s intellect, physique, social relations and aesthetic appreciation.
အသက် ၂နှစ် မှ ၅နှစ် (Regular Classes for Nusery & KG) ကလေးများအတွက် Chinese, Music နှင့် Dance ဘာသာရပ်များကို ဖြည့်သွင်း ပေးထားလို့ ကလေးများအတွက် ပို၍ ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းပြီး ဗဟုသုတ စုံလင်စွာ ရနိုင်ရန် လေ့ကျင့် သင်ကြား ပေးပါသည်။
၅နှစ်မှ ၉နှစ် ကလေးများအတွက် ကိုယ်ပိုင်မူလတန်းကျောင်းကို ဖွင့်လှစ်ပေးထားပါသည်။ ဤ ကိုယ်ပိုင်မူလတန်းကျောင်းတွင် မြန်မာ ကျောင်းသင်ရိုးနှင့်တကွ Extra Curriculum များဖြစ်သော English, Math နှင့် Science ဘာသာရပ်များ ထပ်ဆောင်း သင်ကြားပေးပါသည်။ ထို့ပြင် English4skill ကိုလည်း လေ့ကျင့်ပေးပါသည်။
STREAMLINE မှ အသက် ၆နှစ် မှ ၁၄နှစ် (Weekend Classes) ကလေးများအတွက် Music နှင့် Dance ကို ထည့်သွင်း ပေးထားခြင်းဖြင့် သွက်သွက် လက်လက် ကခုန် သီဆိုရင်း ပျော်ရွှင်စွာ သင်ကြား ပေးပါသည်။
အမှတ်(၂၄)၊ မြစံပယ်လမ်း၊ ပါရမီ်၊ ၉ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
၀၁ ၆၆၂၃၀၄၊ ၀၁ ၆၅၇၆၉၄